चासोक: एक परिचय	आज पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा किरात चाँड उधौलीको उपलक्षमा राष्ट्रिय विदा सबै नेपालीले पाए । यो उधौली चाँड किराती समुदायले मनाउने गर्छन् र जाती समुदाय अनुसार यसलाई विभिन्न नामले चिनिन्छ । यस उधौली पर्वलाई लिम्बूहरुले चासोक भन्ने गर्दछन् भने, खम्बु (र्राई) हरुले यसलाई साकेला, याक्खाहरुले यसलाई चासुवा र सुनुवारहरुले फोलष्यादर भन्ने गर्दछन् । नेपालीमा यस पर्वलाई न्वाँगी पूजा वा मंसिर पूर्णे भनेर प्रचलित छ ।
Author sirjanaPosted on डिसेम्बर 13, 2008जुलाई 30, 2015Categories Limbu, people and places	10 thoughts on “चासोक: एक परिचय”	Dilip Acharya भन्नुहुन्छ:	डिसेम्बर 14, 2008 मा 9:42 अपराह्न	रोचक जानकारी!!
जवाफ फर्काउनुहोस् sangam भन्नुहुन्छ:	डिसेम्बर 15, 2008 मा 3:43 बिहान	स्रीजना जि राम्रो प्रसङ उठाउनु भएछ।अहिलेको जमानामा कतिपय लोप हुनलागेको आफ्नो सस्कृति परम्परहरुलाई जगेर्न गर्ने तपाई हामि सबै लागिपर्नु पर्ने भएकोछ।नत्र एकादेशको कथा भने झै हुन के बेर!!!
जवाफ फर्काउनुहोस् surya'sikaru' भन्नुहुन्छ:	डिसेम्बर 16, 2008 मा 7:09 अपराह्न	हो सृजना जि हो सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेर नेपालि संसकृतिको जगेर्ना गर्न हौस्याएको छ र हामिले पनि आ-आफ्नो ठाउँ बाट प्रयास गर्नु परो खालि पस्चिमाहरुको नक्क्ल मात्रै गर्नु भएन नि हैन र?
जवाफ फर्काउनुहोस् कैलाश भन्नुहुन्छ:	डिसेम्बर 16, 2008 मा 7:29 अपराह्न	सृजना जी रमाइलो बर्णन गर्नुभएकोमा गज्जब लाग्यो। चुम्लुङको प्राङगणमा भएको मेलामा सहभागी हुने मन त थियो नि। तर के गर्नु मन परेका सबै कुरा गर्न नसकिने रहेछ बेलामौकामा। खैर अर्को पालीलाई पनि रुचि जागै छ नि।
जवाफ फर्काउनुहोस् Basanta भन्नुहुन्छ:	डिसेम्बर 19, 2008 मा 9:53 बिहान	समृद्ध किराँत संस्कृतिको एउटा पाटोको बारेमा जानकारी बाँड्नुभएकोमा धन्यबाद!
संयोगवश, मैले अहिले पढिरहेको नेपाली समाज/संस्कृति बारेको एउटा किताबमा पनि किराँत यो पर्व लगायत किराँत संस्कृतिका अरु बिभिन्न पक्षहरुको ब्याख्या गरिएको छ। यतापनि पढ्न पाऊँदा खुशी लाग्यो।
जवाफ फर्काउनुहोस् sirjana भन्नुहुन्छ:	डिसेम्बर 25, 2008 मा 11:14 बिहान	Thanks sabai jana lai…!!
जवाफ फर्काउनुहोस् उजेलि भन्नुहुन्छ:	जनवरी 3, 2009 मा 9:58 बिहान	तपाईँको ब्लगमा भर्खर आइपुगेछु । राम्रो लाग्यो अनि यो तपाईँको टाँसो पनि निकै नै जानकारीमुलक रहेछ । राम्रो लाग्यो ।
जवाफ फर्काउनुहोस् sirjana भन्नुहुन्छ:	जनवरी 5, 2009 मा 10:46 अपराह्न	thank you Ujeli ji.
जवाफ फर्काउनुहोस् Durga Rai भन्नुहुन्छ:	मार्च 5, 2009 मा 6:05 अपराह्न	नमस्ते श्रीजना दिज्यु,
जवाफ फर्काउनुहोस् arjun limbu भन्नुहुन्छ:	मे 5, 2010 मा 12:54 अपराह्न	sewaro i like it veru much n as wel as ur style to create something new in facebook ,u r giving some more positive knowledge for who r searching in internet.n i m also proud with u cause i m also from ilam if u dont mind please mail me on ak47_ilam@yahoo.com i wanna to beagood friend .
Previous Previous post: घुस खुवाउँदा गर्व गर्ने कि लाज मान्ने ?अर्को Next post: Woman